24 Bere a Saul san fii Filistifo akyi bae+ no, wɔbɛka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ! Dawid wɔ En-Gedi+ sare so.” 2 Na Saul faa mmarima mpem abiɛsa a wɔapaw wɔn+ afi Israel nyinaa sɛ wɔrekɔhwehwɛ Dawid+ ne ne mmarima no wɔ abotan so mmirekyi+ atenae, abotan kwaboo no so. 3 Na okoduu abo nguannan a ɛwɔ ɔkwan so no ho. Ná ɔbodan bi wɔ hɔ, enti Saul kɔɔ mu sɛ ɔrekogya n’anan,+ na na Dawid ne ne mmarima no nso tete ɔbodan+ no mu nohoa. 4 Ɛnna Dawid mmarima no keka kyerɛɛ no sɛ: “Yehowa reka akyerɛ wo nnɛ da yi sɛ, ‘Hwɛ! mede wo tamfo rehyɛ wo nsa,+ na nea ɛsɔ w’ani biara, fa yɛ no.’”+ Enti Dawid sɔre yɛɛ brɛoo kotwaa Saul atade nguguso ano. 5 Nanso ɛno akyi no, Dawid koma bɔɔ no+ sɛ watwa Saul atade nguguso ano. 6 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne mmarima no sɛ: “Ɛmpare me sɛ megyina Yehowa anim ayɛ ade a ɛte saa atia me wura a Yehowa asra no+ na mateɛ me nsa aka no, efisɛ Yehowa asra no.”+ 7 Enti Dawid de nsɛm yi siankaa ne mmarima no, na wamma wɔansɔre anhyɛ Saul.+ Saul de, ɔsɔre fii ɔbodan no mu sii so kɔɔ ne kwan. 8 Ɛno akyi no, Dawid sɔre fii adi fii ɔbodan no mu, na ɔteɛɛm frɛɛ Saul sɛ: “Me wura+ ɔhene!” Ɛnna Saul dan n’ani hwɛɛ n’akyi, na Dawid bɔɔ ne mu ase kotow de n’anim butuw fam.+ 9 Na Dawid ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Dɛn nti na woretietie nkurɔfo ano+ sɛ, ‘Hwɛ! Dawid repɛ wo adi wo bɔne’? 10 Ɛnnɛ da yi, wode w’aniwa ahu sɛnea Yehowa de wo hyɛɛ me nsa wɔ ɔbodan no mu nnɛ; wɔkae sɛ minkum+ wo, nanso mihuu wo mmɔbɔ, na mekae sɛ, ‘Meremfa me nsa nka me wura efisɛ Yehowa asra no.’+ 11 Hwɛ, me papa,+ hwɛ sɛ w’atade nguguso ano kura me nsam. Mitwaa w’atade nguguso ano nanso mankum wo. Hwɛ na hu sɛ bɔne+ anaa atuatew bi nni me nsam, na menyɛɛ wo bɔne, nanso wo de, woatɛw me kra pɛ sɛ wuyi fi hɔ.+ 12 Yehowa mmu me ne wo ntam atɛn;+ Yehowa na ɔbɛtɔ were+ wo nsam ama me, na me nsa de, meremfa nka wo.+ 13 Sɛnea tete bɛ no ka no, ‘Amumɔyɛ na ebedi amumɔyɛfo akyi,’+ na me nsa de, meremfa nka wo. 14 Hena na Israel hene atu di n’akyi yi? Hena na wotaa no yi? Ɔkraman funu+ yi? Sommɔre+ biako pɛ yi? 15 Yehowa bɛyɛ ɔtemmufo na wabu me ne wo ntam atɛn, na obehu na wadi m’asɛm+ ama me na wabu me atɛn ayi me afi wo nsam.” 16 Bere a Dawid kaa nsɛm yi kyerɛɛ Saul wiei no, Saul kae sɛ: “Me ba Dawid, wo nne na mete yi anaa?”+ Na Saul maa ne nne so sui.+ 17 Na ɔka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Woteɛ sen me,+ efisɛ papa na woayɛ me,+ na me na mayɛ wo bɔne. 18 Wo de, woama nnipa ahu papa a woayɛ me nnɛ yi, efisɛ Yehowa yii me hyɛɛ wo nsa,+ nanso woankum me. 19 Sɛ ɛba sɛ onipa nya ne tamfo a, ɔde no bɛfa ɔkwampa bi so anaa?+ Ɛno nti Yehowa de adepa betua wo ka+ efisɛ woayɛ me saa nnɛ da yi. 20 Afei hwɛ! minim sɛ wo na wubedi hene,+ na wo nsam na Israel ahenni begyina. 21 Enti ka me ntam Yehowa din mu+ sɛ worentwa m’asefo a wobedi m’akyi aba no ngu, na worempopa me din mfi me papa fie.”+ 22 Ɛnna Dawid kaa Saul ntam, na afei Saul kɔɔ ne fie.+ Dawid ne ne mmarima no de, wɔforo kɔɔ beae a ɛhɔ kɔ yɛ den no.+